FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba
AGASTI 9, 2016
Esi sisizukulwana sokuqala sabafana abangamaNgqina eArmenia ukwenza imisebenzi karhulumente engenanto yokwenza nomkhosi yaye sisebenza ngokuzimisela ukwenza oko urhulumente akulindeleyo kuso. AmaNgqina angaphambili eArmenia abanjwa ngenxa yokuba izazela zawo zazingavumi ukuba aye emkhosini. Noko ke, ngo-2013 iRiphabliki YaseArmenia yamisela umthetho omtsha ovumela abantu ukuba bakhethe ukwenza imisebenzi karhulumente engenanto yokwenza nokuya emkhosini endaweni yokuba baye emkhosini. Sithethanje, angaphezu kwayi-200 amaNgqina akhethe ukwenza le misebenzi. AmaNgqina ayi-16 aye ayigqiba imisebenzi yawo ngasekupheleni kukaJuni 2016.
Ukuphumelela Kwelungiselelo Lemisebenzi Engenanto Yokwenza Nomkhosi
Abafana bokuqala abangamaNgqina abawugqibayo umsebenzi wabo babebanjelwe ukwala ukuya emkhosini. Xa umthetho omtsha waqalisayo ukusebenza aba bafana basiwa apho babeza kwenza khona imisebenzi karhulumente engenanto yokwenza nomkhosi. NgoJanuwari 2014, baqalisa ukusebenza njengabalimi, abacoci bezitrato, abancedisi boomongikazi ezibhedlele neminye nje imisebenzi eqhelekileyo.
Abafana abawugqibileyo umsebenzi wabo ongenanto yokwenza nomkhosi, bayambulela urhulumente kuba ebanike ithuba lokwenza imisebezi enceda abanye abantu neyenza indawo abahlala kuyo ibe ntle. Kweli lungiselelo litsha, abafana abawugqibileyo umsebenzi wabo banokuqhubeka besebenza kwiindawo abahlala kuzo yaye bengajongwa njengezaphuli-mthetho.
UDavit Arakelyan, oneminyaka eyi-22, uwugqibile umsebenzi karhulumente ongenanto yokwenza nomkhosi. Ebencedisa kwikhaya labantu abadala. Uthe: “Umsebenzi ongenanto yokwenza nomkhosi undincede ndazimisela ngakumbi, ndakhathala ndaza ndafunda nokusebenza nzima. Bekumnandi ukuncedisa ukuze kuzuze abanye. Abaphathi, abasebénzi nabanye abahlala kwikhaya labantu abadala bebewuncoma kakhulu umsebenzi wethu.” UMikhayil Manasyan, naye omeninyaka eyi-22, kwathiwa makasebenze kwiSebe Lezohlangulo. Wathi: “Ndafunda izinto ezintsha ngoxa ndandisenza umsebenzi ongenanto yakwenza nomkhosi, ibe ngoku ndingaqeshwa ngobu buchule. Ndikwazile nokunceda ilizwe lam ndinesazela esicocekileyo.”
Ngaba Oko Kwenziwe EArmenia Kungabangela Namanye Amazwe Enze Into Efanayo?
Kutshanje, iArmenia ithathe amanyathelo angakumbi okuhlaziya umgaqo-siseko ukuze kuhlonelwe ilungelo labanye lokungafuni ukuya emkhosini. UMthetho 41(3) womgaqo-siseko ohlaziyweyo, oqalise ukusebenza ngoDisemba 2015, uthi: “Wonke umntu ongenakuya emkhosini ngenxa yonqulo okanye iinkolelo zakhe unelungelo lokwenza eminye imisebenzi engenanto yakwenza nomkhosi.” ICommission of the Council of Europe yayincoma iArmenia ngenyathelo elithathileyo, isithi “yeyona ndlela yokuqiniseka ukuba ziyenziwa izinto ezifunyaniswe kwityala likaBayatyan v. Armenia *, ibe ifanelwe kukunconywa ngaloo nto.”
Le misebenzi karhulumente ibangela iArmenia yenze izinto ngendlela efanayo namanye amazwe. IArmenia iye yayeka ukulawula ngendlela engazicingeliyo izazela zabantu yaza yaqalisa ukuzihlonela. Oku kungumzekelo nakumazwe aphatha kabuhlungu abantu abangavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Le nto yenziwe yiArmenia ibonisa ukuba oku kunganceda urhulumente nabantu.
Isithethi esimela amaNgqina KaYehova eArmenia, uTigran Harutyunyan sithe: “Siyayivuyela into yokuba urhulumente waseArmenian ethathe amanyathelo okuqiniseka ukuba sifumana amalungelo asisiseko, kuquka nelungelo lokungayi emkhosini ngenxa yesazela. Abafana abangamaNgqina baseArmenia ngoku banokwenza nantoni efunwa ngurhulumente ngendlela evumelana nezazela zabo neluncedo kwabanye abantu.”
^ isiqe. 8 IBayatyan v. Armenia ([GC], no. 23459/03, ECHR 2011) yayisisigwebo esakhutshwa siSigqeba Esiphezulu seEuropean Court of Human Rights. Okokuqala, iNkundla yagweba ngelithi ilungelo lokungavumi ukuya emkhosini ngenxa yesazela likhuselwe phantsi koMthetho 9 (inkululeko yokucinga, eyesazela neyonqulo) weEuropean Convention on Human Rights.
Ukwenziwa Kweenkonzo Ezingenakuthanani Nomkhosi Kuyaphumelela EArmenia